Point Break (2015) | MM Movie Store
လိုငျးဖွတျ သို့တညျးမဟုတျ ကရြှုံးခြိနျနရောတဈခု…..မိတျဆှတေို့ရဲ့ Point Break ကရော . ဘယျအခြိနျ.. ဘယျနရောမှာပါလဲ?ဒီဇာတျလမျးထဲက ဇာတျကောငျတှရေဲ့ PointBreakကတော့…..ဇာတျလမျးကတော့ ဘကျစုံကြှမျး အားကစားသမားဖွဈတဲ့ယူတာ့ရျှတဈယောကျ
FBI ကို ဝငျဖွဈပုံနဲ့ စတငျထားပါတယျ။သူရောကျပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ စိတ်တဇဆနျဆနျ လုယကျမှုတှပေျေါပေါကျလာပါတော့တယျ။ ယူတာ့ရျှဟာ အမှုသှား အမှုလာတှကေိုလလေ့ာပွီးတော့ သံသယရှိသူတှဟော ဘကျစုံကြှမျး အားကစားသမားမြားဖွဈနိုငျကွောငျး တငျပွခဲ့ပါတယျ။
အကွောငျးကတော့အိုဇာကီ ၈ ခကျြ ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နပေေးရငျထှကျရပျပေါကျမယျဆိုတဲ့ အယူဝါဒကွောငျ့ပါ။ဒီလိုကိစ်စတှကေို လုပျမယျ့သူတှဟောဘကျစုံကြှမျးအားကစားသမားမြားပငျ ဖွဈနိုငျကွောငျး တငျပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ FBI အထကျတနျးက အဲ့ဒီအယူအဆကိုလကျမခံခဲ့ပါဘူး။ တဈခုရှိတာကတော့ ယူတာ့ရျှရဲ့ဘော့ဈ ဟောလျက လကျခံပေးလိုကျတာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတငျ အသှငျယူစဈဆငျရေးစတာပါပဲခငျဗြ။
အိုဇာကီ ၈ ခကျြထဲကအတိုငျး ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှာစတနျ့ပွကှကျတှေ၊ ဒုစရိုကျလုပျငနျးတှကေိုလုပျဆောငျသှားတာတှကေို ရငျသကျရှုမောဖှယျ ကွညျ့ရှုခံစားကွရမှာပါ။
စတနျ့ပွကှကျတှေ ဖောဖောသီသီ သုံးထားတဲ့ အကျရှငျခနျးတှအေမြားကွီးပါတဲ့အတှကျ စတနျ့ကားကွိုကျသူတှအေတှကျကတော့လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈကွောငျးပါခငျဗြား . . .
လိုင်းဖြတ် သို့တည်းမဟုတ် ကျရှုံးချိန်နေရာတစ်ခု…..မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Point Break ကရော . ဘယ်အချိန်.. ဘယ်နေရာမှာပါလဲ?ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ PointBreakကတော့…..ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘက်စုံကျွမ်း အားကစားသမားဖြစ်တဲ့ယူတာ့ရ်ှတစ်ယောက်
FBI ကို ဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ စတင်ထားပါတယ်။သူရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ္တဇဆန်ဆန် လုယက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ ယူတာ့ရ်ှဟာ အမှုသွား အမှုလာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ သံသယရှိသူတွေဟာ ဘက်စုံကျွမ်း အားကစားသမားများဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့အိုဇာကီ ၈ ချက် ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေပေးရင်ထွက်ရပ်ပေါက်မယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကြောင့်ပါ။ဒီလိုကိစ္စတွေကို လုပ်မယ့်သူတွေဟာဘက်စုံကျွမ်းအားကစားသမားများပင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် FBI အထက်တန်းက အဲ့ဒီအယူအဆကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ယူတာ့ရ်ှရဲ့ဘော့စ် ဟောလ်က လက်ခံပေးလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတင် အသွင်ယူစစ်ဆင်ရေးစတာပါပဲခင်ဗျ။
အိုဇာကီ ၈ ချက်ထဲကအတိုင်း ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှာစတန့်ပြကွက်တွေ၊ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်သွားတာတွေကို ရင်သက်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ။
စတန့်ပြကွက်တွေ ဖောဖောသီသီ သုံးထားတဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက် စတန့်ကားကြိုက်သူတွေအတွက်ကတော့လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား . . .
Point Break – Utah (Luke Bracey) ©2014 Alcon Entertainment, photo by Reiner Bajo
Healing Mate – Link 2